Sary Tranainy Mampiseho Ny Fahitàna ny Andrefan’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2015 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Italiano, Ελληνικά, 日本語, Deutsch, Aymara, English
Japan circa 1886. Loharano: yves Tennevin, mpampiasa Flickr, nampiasàna ny lisansa ho an'ny daholobe.
Nitily toerana i yves Tennevin ary nampakatra ny sasantsasany tamin'ìreo sary mahazendana nolokoina tamin'ny tànana ahitàna an'i Japàna tamin'ny taonjato faha-19, taorian'ny nanokafan'io firenena io indrindra ny varavarany ho an'izao tontolo izao.
Hita amin'ny sehatra natao ho an'ny daholobe daholo ireo sary rehetra, ary heverina ho tao Japàna no nalain’i Adolfo Farsari, teratany Italiana mpakasary, tany amin'ny faramparan'ny 1880. Maro amin'ireo fanontàna navoakany no nolokoina tamin'ny tànana, fomba fanao iray izay nahazatra ihany tao Japàna tany amin'ny faran'ny taonjato faha-19, rehefa injay nitsidika tao i Farsari.
Fantina goavana iray amin'ireo sary nopihan'i Farsari no azo jerena amin'ny toerana samihafa manerana ny tranonkala. Ny fantin'ny Nagasaki Library Collection amin'ny sarin'i Farsari dia ahitàna maribolana famariparitana momba ny toerana nakàna ireo sary.
Raha tianao ireo, mety tianao ihany koa ny hitsirika hijery andian-tsary tranainy iray hafa momba an'i Japàna avy amin'io vanimpotoana io ihany, saingy ilay Japoney mpakasary, T.Enam0, no naka azy.